Ukupaka amagalaji Kuyathengiswa Nokuqashwa eNorwich, eNorfolk
Uhlu Lwezakhiwo: Amagaraji nezindawo zokupaka izimoto Ukupaka amagalaji Norfolk Norwich
Ukupaka i-2 Bed Parking / egalaji Ukuqasha eNorwich, eNorfolk
** iyatholakala nge-A yediphozithi yenketho yamahhala ** Ikamelo lokulala lababili elifakwe kumakamelo endlu etholakala endaweni ekufunwa kuyo i-Hampdens West yeNorwich.Isakhiwo sitholakala kalula ngokutholakala kwe-A47 eseningizimu yedolobha, iJohn Innes Center, Norfolk Norwich Isibhedlela saseNyuvesi, kanye neN ...
INorwich ((lalela)) idolobha elinomlando eNorfolk, eNgilandi. Itholakala eMfuleni Wensum e-East Anglia, itholakala cishe ngamakhilomitha angama-100 (160 km) enyakatho-mpumalanga yeLondon. Yidolobhana laseNorfolk futhi libhekwa njengenhloko-dolobha yase-East Anglia, enabantu abaningi be-141,300. Kusukela ngeNkathi Ephakathi kuze kube yiMizi Yezinguquko, i-Norwich yayiyidolobha elikhulu kunazo zonke eNgilandi ngemuva kweLondon, futhi enye ebaluleke kakhulu.Idolobha leli lidolobha eliphakathi kunawo wonke e-United Kingdom, kufaka phakathi imigwaqo ebanjelwe ezinjenge-Elm Hill, iTimber Hill ne ITombland, izakhiwo zasendulo ezinjengeSt Andrew's Hall, izindlu eziphethwe uhhafu njenge Dragon Hall, The Guildhall and Stranger 'Hall, Art Nouveau ye1899 Royal Arcade, imizila eminingi yangezikhathi zakudala kanye noMfula iWensum odonsa ogeleza phakathi nendawo INqaba yaseNorwich. Leli dolobha linamanyuvesi amabili, i-University of East Anglia kanye neNorwich University of the Arts, kanye namakati amabili, iNorwich Cathedral neSt John the Baptist Cathedral. INorwich kuwukuphela kwedolobha eliqukethe ingxenye yePaki Yezwe, iNorfolk Broads, futhi futhi inemakethe enkulu kunazo zonke engapheli e-Europe. Indawo yasemadolobheni yaseNorwich yayinabantu abaningi be-213,166 ngokuya nge-2011 Census. Izihlalo zephalamende zinqamula kwizifunda eziseduzane zohulumeni basekhaya. Isamba sabantu abangu-132,512 (2011 census) bahlala eDolobheni laseNorwich, nesibalo sabantu beNorwich Travel to Work Area (okungukuthi, indawo yemakethe yezabasebenzi enayo uqobo nasesizungezile eNorwich lapho iningi labantu lihlala futhi liqala ukusebenza) ngu-282,000 (maphakathi-2009). INorwich yisifunda sesine sikahulumeni esinabantu abaningi kakhulu eMpumalanga yeNgilandi, sinabantu abangama-3,480 ngekhilomitha elilodwa lesikwele (8,993 ngekhilomitha elilodwa). NgoMeyi 2012, uNorwich waqokwa njenge-UNESCO City of Literature yokuqala eNgilandi. Enye yezindawo ezithandwa kakhulu izivakashi zase-UK, yavotelwa yi-The Guardian e-2016 njenge "dolobha elijabulisa kunazo zonke ukusebenza e-UK" nase-2013 njengenye yamadolobha amancanyana emhlabeni wonke yi-The Times Good University Guide. Ku-2018, uNorwich wavotelwa enye yezindawo "ezinhle Ukuhlala" e-UK yi-Sunday Times.